Biraoko ô, inona izany? Jereo ny fitantanana nomerika an'ireo orinasa
TOROHEVITRA MANOKANA NY VIRTUAL ANY amin'ny firenena 56
ATOLOTY NY BOKOKA VEHIVAVY!
Te hanokatra ny orinasanao na ny asanao amin'izao tontolo izao na amin'ny firenena iray ianao, avy eo aza misalasala mamorona ny biraoko MY OFFICE virtoaly. Ity vahaolana ivon-toeram-pivarotana virtoaly ity dia manome anao ny fahafaha-miditra amin'ny adiresy malaza any amin'ireo renivohitra tsara indrindra eran'izao tontolo izao, ary koa isa eto an-toerana izay naterina tamin'ny switchboard fandraisana eo afovoany.
Fandraisana amin'ny mailaka, hafatra ary fampahalalana hafa momba ny orinasanao
Mamorona birao virtoaly anao amin'ny fisoratana anarana tsotra avy amin'ny interface MY OFFICE
NY FANAOVANA AN-TOKONY
Fitaovana fitantanana maherin'ny 50 ho an'ny orinasanao mba hamerenany ny fomba fiasa sy ny fitantanana anao.
Sokafy ny biraom-barotranao, biraon'ny sampana na ny biraon'ny sampana misy tsindry vitsy monja.
Sokafy ny orinasanao amin'ny minitra 15
Manokatra kaonty banky androtrizay amin'ny € $ £
Manana adiresy malaza
9 Mpanatrika Presence: 00 AM to 05: 00 PM
FAHORIANA NY FIVORIANA NA VOAFITRAN-TRANETRA
Mizaha ny tenanao amin'ny fampiononana avy amin'ny fitantanana sy ny fibaikoana tanteraka ny orinasanao any lavitra any, fahafaha-manao izay tsy voavidim-bola ho an'ny mpandraharaha na ho an'ny vondrona iraisam-pirenena.
Tantano tanteraka ny asanao amin'ny alàlan'ny fitaovana MY OFFICE izay omena anao maimaimpoana. Ny fitantanana ny orinasanao amin'ny solosainao, finday avo lenta na avy amin'ny takelakao aza.
Arovy ny asanao amin'ny Internet tsy misy fihetsehana, apetraho ny asanao, lahatsoratra, feo, tetikasa, marika, tranokala ary zavatra hafa rehetra. Ny teknôlôjia no ahafahantsika manao ny fametrahana ny tahiry sy ny fiarovana ny asanao mivantana avy amin'ny serivisinao FISAKO, izay halefa halefa any amin'ny 24 H.
NY FIVAVAHANA AN-TRANO FINOANA AN-TOKONY 56
Fidirana amin'ireo ivon-toeram-piasana mihoatra ny 56 avy amin'ny birao virtoaly MY OFFICE, fidirana amin'ny famoronana, fitantanana, fitaovana fitantanana… ary asa mihoatra ny 50.
MAMORA NY BIRIOTSIN'NY VIRTUAL ANAO IZAO MAIMAIMPOANA